Wararka - Teendhooyin koraan ayaa loo beeray si ay uga caawiyaan beeralayda inay goostaan ​​dalagyada heerkul ku habboon
Makiinada Korontada gooya
Qalabka Joogsiga Korontada
2 gudaha 1 Teendhada Kori
Saqafka Cube Koritaanka Teendhada
Koritaanka Xirmooyinka Iftiinka
maqas aan lahayn
maqas dahaadhay Titanium
Teendhooyin koraan ayaa loo beeraa si ay uga caawiyaan beeralayda inay goostaan ​​dalagyada heerkul ku habboon
Ka fogaanshaha heerkulka sare waa caqabad ay la kulmaan qaar badan oo ka mid ah beeralayda gudaha, inkasta oo dhibaatada siyaabo kala duwan wax looga qaban karo. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee aad ku ilaalin karto heerkulka saxda ah ee teendhadaada koraya si ay u koraan dhirta ugu fiican. Kaarboon dioxide
Si ka fudud sida ay u dhawaaqdo, isticmaalka kaarboon laba ogsaydhku aad ayuu khatar u noqon karaa, maadaama ay caawiso keliya marka ay dhaafto heerkulka ugu habboon ee teendhooyinka. Laga soo bilaabo bayoolaji aasaasiga ah, dhammaanteen waan ognahay in kaarboon laba ogsaydhku ay muhiim u tahay photosynthesis dhirta, markaa waxa soo qabanaya waa marka aad kordhiso heerarka carbon dioxide si aad u bedesho heerarka teendhada oo aad ka caawiso inaad si hufan u qabato dhammaan dalagga, sidaas darteed ilaalinta shaqada caadiga ah xitaa xaaladaha kulul.
Iftiin hawo qaboojiyay
Habka falkani waa mid aad u fudud, waxa kaliya ee ay qabato waa in la isticmaalo soosaar si aad hawada ugu riixdo nalka, ka dibna isticmaal aluminium ama tuubooyinka dahaaran si aad hawada kulul uga saarto teendhadaada koritaanka. Jidka dhawaaqa ayaa ka fiican aluminium sababtoo ah waxay qabataa qaboojin ka badan aluminium. Sidaa daraadeed, dhammaantiis, nalka hawo qaboojiyey ayaa ka kooban muraayad hoose oo abuureysa marin ku habboon hawada. Hawo qabow ayaa lagu sii daayaa kanaaladan waxayna baabi'isaa kulaylka korkiisa.
Horumarinta wareegga hawada wanaagsan
Waxaa muhiim ah in la hubiyo wareegga ugu wanaagsan ee hawada gudaha teendhada koreysa si looga hortago dhibco kulul. Tani waxay sidoo kale hubin doontaa in dhirtaadu u koraan si caafimaad leh oo caleentooda iyo afkoda ay u koraan xoog. Hubi inaad maalgeliso taageerayaasha rogrogmi ama aad leedahay taageerayaal badan, jihooyin beddelan tan iyo helitaanka caleemaha jihooyin kala duwan waa qasab, maadaama nuqul ka mid ah dhaqdhaqaaqa dabiiciga ah ee jawiga dibadda uu sii aaminsan yahay in furaha uu yahay in la haysto teendho faneedka gees kasta. ee koritaankaaga.
Qolka si fiican loo dahaaran yahay wuxuu caadi ahaan caawiyaa habeynta heerkulka teendhada koraya, maadaama aysan ku salaysneyn xaaladaha deegaanka dibadda. Xaaladaha qaarkood, nalka ayaa noqon kara sababta ugu weyn ee kororka kulaylka khatarta ah, in kasta oo inta badan kiisaska tani laga yaabo inay sabab u tahay dahaarka xun, gaar ahaan haddii aad leedahay teendho beerto oo ku yaal saqaf kulul hoostiisa. Dahaarka dhulka ayaa ah hab qabow sababtoo ah carradu waxay bixisaa dahaadh dabiici ah. Markaa si aad u qaboojiso teendhadaada, waxa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto karantiil qolkaaga.
Waqtiga boostada: Oct-30-2021
CINWAANKA: Warshada He Yuzhou, Niutang Area, Ka soo horjeeda Suuqa Dhagaxa Weibao, Guddiga Tuulada Sha'ao, Magaalada Sandong, Degmada Huicheng, Huizhou, Guangdong, Shiinaha.